Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Somaliland oo Tabobbar u Furay Laba Boqol oo ka tirsan Macallimiinta Maddarasadaha Heer Qaran ee dalka | Somaliland Post
Home News Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Somaliland oo Tabobbar u Furay Laba Boqol oo...
Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Somaliland oo Tabobbar u Furay Laba Boqol oo ka tirsan Macallimiinta Maddarasadaha Heer Qaran ee dalka
Hargeysa (SLpost)- Wasiirka Wasaaradda Diinta iyo awqaafta Jamhuuriyadda Somaliland Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed, ayaa tabobbar aqoontooda kor loogu qaadayo u furay 200 (laba Boqol) oo Macallin oo ka tirsan Macallimiinta Maddarasadaha dalka ee heer Qaran.
“Waxaanu diiwaangelinnay Madaarista ilaa aanu ka dhammeystirnay Afar Gobol oo ay ugu horeyso Caasimadda, gobolka Togdheer, gobolka Awdal iyo gobolka Saaxil, taas oo runtii si wanaagsan noogu soo dhammaatay. Labada gobol ee hadhsan ee Sool iyo Sanaag-na waxaanu doonaynaa inaanu dhawaan ka hirgelinno (Diiwaangelinta Madarashadaha). Ujeeddada aanu ka leenahay diiwaangelintaasi waxa weeyi in la hor mariyo, la tabobaro lana tayeeyo Madaariska iyo Macalimiintaba maadaama Wasaaradda Diinta iyo Aw-Qaaftu ka mid tahay wasaaradaha dalka ugu muhiimsan, Qur’aanka Kariimka ah iyo Barashadiisuna ka mid yahay masuuliyadda Wasaaradda Diinta iyo Aw-qaafta,” Sidaas ayuu yidhi Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Diinta iyo Aw-qaafta.
Agaasimaha oo Hadalkiisa sii watay, waxa uu intaas ku darya oo yidhi, “Tabobarkan waxa ka qayb-qaadan doona Afar Kun iyo Todoba Boqol (4700) oo macalin, labada Boqol (200) ee halkan fadhiyaana waa wejigii kowaad, waanu inoo socon doonaa, ujeeddada aanu ka leenahayna waa in la tayeeyo macalimiinta”.
“Waxaan runtii dareemayaa guul-weyn oo ah inaynu hore u sii soconno, Allah haynoo siyaadiyee, halka uu Qur’aanku (Barashadiisa) marayey baryo qaar iyo halka uu maanta marayo runtii waa Nimco weyn, waxay maalinba maalin inoo soo dhiibto, maanta waxa Illaahay mahaddii ah oo wasaaradda Diinta iyo Aw-qaafta aad ugu mahad-naqaynaa inay inoo diyaarisay goobtaa quruxda badan,” Sidaas ayuu yidhi Sheekh Maxamed Aadan.
“Qiraa’ada iyo Qoraalka waxa ka muhiim Barbaarinta, mustaqbalka Qarankani noqon doono waxa u tusaale ah waxa aad immika ku baraarisaan carruurteenna. Idinku waxa aad dhisaysaan umadda, xil weyn baa idin saaran,” Sidaas ayuu yidhi Wasiirku.
“Mustaqbalka umaddeenu wuxuu ku xidhan yahay hadba sida barbaarinta ubadkeennu yihiin, sida ay u eegyihiin, gaar ahaan da’da u dhexaysa laba jir ilaa siddeed jir oo ilmaha yari noqonayo mid maskaxdiisa ku daabacaya waxa uu indhihiisa ku arko ama uu dhegaha ku maqlo. Maadaama aad tihiin macalimiintii isu xilsaaray Illaahayna Waafajiyey inay hayaan shaqadii ugu qiimaha badnayd ee ugu sharafta badnayd adduunyada oo ah inay dadka baraan Qur’aanka Kariimka ah oo ah Waxyigii iyo Kalaamkii Allah (SWT) oo Ilmaha yar qalbigiisa ku daabacaan,”Sidaas ayuu yidhi Wasiirka Diinta iyo Aw-Qaafta oo la hadlayey Macalimiinta Tababarka loo furay.
Wasiirka oo ka hadlayey Qiimaha Macalinku ugu fadhiyo Bulshda, waxa uu yidhi, “Waxaad ka war-hayaan fadliga guud ahaan macalimiintu leeyahay. Macalinka Maaddiga ah iyo guud ahaan kuwa wax-dhigayaba wuxuu siiyey amaan, waxa haddana si gaar ah loo sii ammaanay macalinka dhigaya Qur’aanka Kariimka ah oo la yidhi Waxa idinku kheyr badan qofka Qur’aanka Dadka baray”.